Iselula Ungazibizi Izokubhalisa
NgoLwesine, Januwari 20, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kubukeka sengathi kungangezwa izinombolo zeselula ku-Indiana's Do Not Call registry kungekudala. Alikho igama okwamanje ukuthi lokhu kuzoba nomthelela yini ekuthumeleni imiyalezo, kepha akungabazeki ukuthi lokhu kuseduze kwekhoneni.
The i-United Kingdom futhi Canada sezivele zifaka izinombolo zeselula kuma-registries abo ahloniphekile okuthi Ungazibizi. E-United States, bobabili i-Utah neMichigan banakho Ungabizi ama-registries okufaka phakathi ukushaya ngeselula ne-SMS. Ngokubona kwami, ngikholelwa ukuthi lezi yizindaba ezinhle. Ngihlale ngingummeli wokumaketha okusekelwe kwimvume. Ngokwamukelwa okukhulu kwamadivayisi eselula nabantu abasha, bekufanele ngabe sakha ukubhaliswa kwe-DNC eminyakeni edlule. Vele, lapho-ke amashumi ezigidi zamadola abekhokhiswa izinsizakalo ezingekho emthethweni zamaselula abengeke aqoqwe.
Lokhu kubalulekile kubo bobabili abathengisi nabahlinzeki bezinsizakalo. Uma usebenzisa imiyalezo yezwi noma izinsizakalo zokuthumela imiyalezo, uzofuna ukuqinisekisa ukuthi insiza yakho ihlanza izinombolo zokubhalisa ekuthumeleni imilayezo. UWalter Meyer, uMongameli kanye ne-COO yeVontoo - insizakalo ehamba phambili yokuthumela imiyalezo ngezwi nokuthi inkampani yabo ihlunga izingcingo eziphikisana nohlu lweDNC.
Okufanele ukukhumbule ukuthi uma inkampani ibhale imvume yokuxhumana nothile, bangakwenza lokho noma ngabe inombolo yalowo muntu iku-DNC. UWalter Meyer, uVontoo.
UWalter unezela ngokuthi konke ungohlu lwe-Do Not Contact lwe-snail mail (leposi) ne-imeyili, futhi… kungukuwina kwabakhangisi abanesimilo kanye nomphakathi jikelele. UWalter uxoxe ngezinselelo zokumakethwa kwezwi futhi wathi yize iVontoo ngokomlando igxile kwezokumaketha, ukukhula kwabo okuqine kakhulu kuyizikhumbuzo, izaziso, nohlolo
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ababhalisi be-Do Not Call abaziphathi ngendlela efanayo ne-imeyili. Nge-imeyili, ungathumela i-imeyili yokuqala inqobo nje uma unezindlela zokukhetha ukuphuma. Okwamanje, le yindlela okuthumela ngayo imiyalezo ngokuvamile… kufanele ukhethe ukungena ukuze uthole umlayezo wombhalo futhi ungaphuma noma kunini. Lapho ukubhaliswa (nezinhlawulo ezilandelayo) sezikhona, awusoze wathumela lowo mlayezo wokuqala - uma kungenjalo uzibeka engcupheni yenhlawulo yesilo!
Nalu uhlu lapho ungathola khona uhlu lwe-Do Not Call by state: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, ELouisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, E-New Jersey, ENew Mexico, I-New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin futhi Wyoming.
The federal Ungabizi Ukubhaliswa kwe-United States njengamanje akuvikeli abathengi beselula… kepha ngiyaqiniseka ukuthi ukungezwa kwemiyalezo ephathekayo nokuthumelelana imiyalezo kuseduze.